"Metal Church" ufakelo olukhulu nguEdward Tresoldi | Izidalwa ezikwi-Intanethi
"Icawa yensimbi" ufakelo olukhulu nguEdward Tresoldi
Ngamakhulu eeyadi zocingo, umzobi U-Edoardo Tresoldi wakhe utoliko lwecawa yokuqala yamaKristu eyakhe yema endaweni yayo kwipaki yezinto zakudala yaseSiponto, e-Itali. Yakhiwe ngoncedo lwe Icandelo loMphathiswa Weeasethi zeNkcubeko kunye neMisebenzi, ufakelo ludibanisa nobugcisa bamandulo.
Umfanekiso oqingqiweyo umi kwindawo yecawa yakudala ene ubukho besiporho, que Ijongeka iphantse yafana nehologram ngenkqubo yokukhanyisa abayenzileyo kule paki ithi. Ufakelo lunezinto zokwakha ezibandakanyiweyo kwiikholamu ezinyathelwe, izindlu kunye nemifanekiso eqingqiweyo evelele ngaphakathi kulwakhiwo.
U-Edoardo Tresoldi Uchithe iinyanga ezimbalwa ezidlulileyo eSiponto, e-Italiya basebenza kwelona ziko likhulu ukuza kuthi ga ngoku. Ukufakwa kwegcisa lase-Italiyali kube nako Guqulela kwakhona izithuba ekwakukade zihlala kwiCawe yamaKrestu yamanduloIndalo yenziwe ngocingo olunombala kunye nokukhanya kwipaki yezinto zakudala yaseSiponto.
Umxholo wezinto zakudala udibene nomsebenzi we U-Edoardo Tresoldi inika ubomi obutsha kulecawe indala ilityelweyo.
Umsebenzi ka-Edoardo Tresoldi ubonakala njengoyilo lobugcisa obubalaseleyo obunakho ukuxelela imiqulu yeCawa yamaKristu yangoku neyokuqala, kwaye kwangaxeshanye, ikwazi ukuyiphilisa, uyihlaziye, ubudlelwane phakathi kwamandulo kunye nexesha langoku. Umsebenzi othi, ukuba impikiswano yelizwe yobungangamsha kwezobugcisa yaphulwe, ishwankathela iilwimi ezimbini ezihambelanayo kwindawo enye, enomdla. -USimone Pallota
Sishiya i igalari yemifanekiso apho unokujonga khona imifanekiso emininzi yefektri kwaye emva koko singathanda ukuba usenzele izimvo Ucinga ntoni ngalo msebenzi umhle kangaka?
Ungabona ngaphezulu komsebenzi we UTresoldi kweyakhe Facebook y Behance.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » "Icawa yensimbi" ufakelo olukhulu nguEdward Tresoldi